Apple computer အရှင်သခင် စတိဂျော့ဗ် သေပြီ Dead | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » U.S. News » Apple computer အရှင်သခင် စတိဂျော့ဗ် သေပြီ Dead
Apple computer အရှင်သခင် စတိဂျော့ဗ် သေပြီ Dead
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Oct 6, 2011 in U.S. News, World News | 22 comments
အက်ပဲလ်ကွန်ပြူတာ၊ အိုင်ဖုံး။ အိုင်ပေါ့ဒ်၊ အိုင်ပဒ်၊ အိုင်ကျူးန်းတေးဂီတဆိုက် တို့၏အရှင်သခင် စတိဂျော့ဗ် အသက်၅၆နှစ် (၁၉၅၅-၂၀၁၁) ကွယ်လွန်သွားပါပြီ။ သူသေဆုံးကြောင်းသတင်းကို အက်ပ်ပဲလ်ကုမ္မဏီဆိုက်မှာ ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် စာမျက်နှာပြည့် ကြေငြာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ စတိဂျော့ဗ်သည် အက်ပဲလ်ကွန်ပြူတာကုမ္မဏီကို ၁၉၇၆ခုနှစ်တွင် ငယ်သူငယ်ချင်း Steve Wozniak နှင့်အတူ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အဲဒီအချိန်က ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး တကိုယ်ရည်သုံးကွန်ပြူတာလို့ ပြောနိုင်တဲ့ Apple II ကိုဈေးကွက်တင် ရောင်းချခဲ့သည်။
ကွန်ပြူတာတွက်ချက်မှုများ၊ တေးဂီတထုတ်လုပ်မှုရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍများ တခေတ်ဆန်းသစ်စေခဲ့လို့ ကွန်ပြူတာလောကက သူ့ကို master innovator အဖြစ် လျှပ်စစ်မီးကို တီထွင်ခဲ့သူ သောမတ်စ်အက်ဒီဆင်နဲ့ တတန်းထဲထား သမုတ်ကြပါတယ်။
၂၀၀၄ခုနှစ်တုန်းက ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထမရှိတဲ့ ပန်ကရိယ ကင်ဆာရောဂါကနေ နာလန်ထူလာခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ခုနှစ်မှာ တခါ အသည်းအစားထိုး ခွဲစိတ်ကုသခဲ့ရပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ မနာမကျန်းဖြစ်ပြီးနောက် ဩဂုတ်လ၂၄ရက် နေ့မှာ အက်ပဲလ်ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ရာထူးကနေ ဆင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့နှုတ်ထွက်စာ ထဲမှာ “ကုမ္မဏီ CEO ရဲ့ တာဝန်နဲ့ မျှော်လင့်ချက်များကို ဆက်လက်ထမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း မရှိနိုင်တော့တဲ့ နေ့ တနေ့ရောက်လာမယ်လို့ ကျနော်အမြဲပြောခဲ့ပါတယ်။” “ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲ အဲဒီနေ့ ရောက်လာပါပြီ။”
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ထင်ပေါ်အကျော်ကြားဆုံးများထဲက တယောက်ဖြစ်သူ ဂျော့ဗ်ဟာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝကို ထုတ်ပြောလေ့မရှိဘဲ အင်တာဗျူးများကို ငြင်းပယ်ကာ သူ့ဇနီးနဲ့ခလေးများကို လူမြင်ကွင်းမှ အကာကွယ် ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ “ဂျော့ဗ်ဟာ ဘယ်တုံးကမှ မီဒီယာပုဂ္ဂိုလ် မဖြစ်ခဲ့ဘူး” “အက်ပဲလ် တံဆိပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ သက်ဆိုင်မှသာ အင်တာဗျူးလက်ခံတွေ့ဆုံတယ်” သူ့အကြောင်း သိရှိသူတဦးက ပြောပါတယ်။
Laurene Powell နဲ့ ၁၉၉၁ခုနှစ်မှာ ဧည့်ခံပွဲအသေးလေးတခုလုပ်ပြီး လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ခလေးသုံးယောက် ရှိပါတယ်။ သူ့အသက် ၂၃နှစ်မှာ အထက်တန်းကျောင်းနေဘက် သူငယ်ချင်း Chris Ann Brennan နဲ့ လက်မထပ်ဘဲ ရတဲ့ ခလေးတဦးရှိတယ် ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ သူ့သမီး လီဆာဂျော့ဗ်ကို ၁၉၇၈ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့တာပါ။ လီဆာရဲ့ မိဘအဖြစ် လက်မခံဘဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ ငြင်းပယ်နေခဲ့ပြီး တချိန်မှာဆို သူဟာ ခလေးမရနိုင်သူ (အဖိုမျိုးဥ မထုတ်ပေးနိုင်သူ) အဖြစ် တရားရုံးမှာ ကျန်းကျိမ်ထွက်ဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ လီဆာကို သူ့သမီးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။
အမအရင်းဖြစ်သူ Mona Simpson ဟာထင်ရှားတဲ့ စာရေးဆရာမ တဦးဖြစ်ပေမဲ့ ဂျော့ဗ်တယောက် အရွယ်ရောက်လာခဲ့ချိန်မှာ မွေးမိဘများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ချိန်အထိ တဦးနဲ့တဦး မဆုံတွေ့ခဲ့ကြပါဘူး။ သူတို့ဆက်ဆံရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမဖြစ်သူရေးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာ သူ့ကို ပုံမှန်သူလိုငါလို တယောက်အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဂျော့ဗ်နဲ့ပတ်သက်လို့ အခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များလည်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ရာမှာ အဆိုတော့ Joan Baez နဲ့လည်း ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့တယ်လို့ ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်း Elizabeth Holmes က ပြောပါတယ်။ “The Second Coming of Steve Jobs,” စာအုပ်ထဲမှာ ဂျော့ဗ်ဟာ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အဆိုတော်တဦးနဲ့ လက်တွဲနိုင်ဖို့ သူစွဲစွဲမြဲမြဲတွဲခဲ့တဲ့ ရည်းစားနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့တယ်လို့ လက်ထောက်ချထားပါတယ်။
ဂျော့ဗ်ဟာ သူ့အကြောင်းပြောခဲပါတယ်။ ကုမ္မဏီကနေ သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် ဆေးခွင့်ယူခဲ့ရပေမဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို မပြောဆိုခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၀၉ခုနှစ်မှာတော့ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့က သူ့ကျန်းမာရေးဟာ ကုမ္မဏီရဲ့ကျန်းမာရေးပါပဲဆိုပြီး ပိုမိုပွင့်လင်းမှုရှိရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဖိုဘီမဂ္ဂဇင်းက ဂျော့ဗ်ကို အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှု ၈.၃ဘီလျံဒေါ်လာရှိသူ ကမ္ဘာမှာ ၁၀၉ဦးမြောက် အချမ်းသာဆုံး ဘီလျံနာအဖြစ် စာရင်းသွင်းထားပါတယ်။
အကဲခတ်များက ဂျော့မရှိစဉ်ကာလမှာ အက်ပဲလ်ကုမ္မဏီဟာ ကောင်းစွာလည်ပတ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ဂျော့ဆီကနေ အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ရယူနိုင်ခဲ့လို့နဲ့ သူ့လက်ထောက် Tim Cook ဟာ ဂျော့ဗ်ရှိစဉ်ကထဲက စီမံအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းကို နီးနီးကပ်ကပ် လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၉ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတုန်းက ဂျော့ဗ်ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဆေးခွင့်ကို ထုတ်ပြန်စဉ် အက်ပဲလ်ရှယ်ယာ ဈေးနှုန်းသည် ၇၈.၂ဒေါ်လာသို့ ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲ ရှယ်ယာဈေးနှုန်း ပြန်မြင့်တက်လာပြီး ဝေါလ်စထရိမှာ အအောင်မြင်ဆုံး စတော့ခ်ရှယ်ယာအဖြစ် သရဖူဆောင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၁ခုနှစ် နွေရာသီ ကာလတုန်းက တနေ့မှာဆိုရင် အက်ပဲလ်ရှယ်ယာဈေးနှုန်းဟာ ၄၀၀ဒေါ်လာသို့ ရောက်သွားပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ တန်ဖိုးအများဆုံး စတော့ခ်အဖြစ် တခဏမျှ ရေနံကုမ္မဏီ ExxonMobil ကိုကျော်တက်ခဲ့ဖူးသည်။
ကျနော့်မှီသလောက်တော့ သူ့လိုမျိုး ကုမ္မဏီအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သူ ဘော့စ်မျိုး အလွန်ရှားပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်း မန်နေဂျာချုပ် အဲလက်စ်ဖာဂူဆန် အနားယူမယ်လို့ ကြေငြာတုန်းက (၁၉၉၀ နောက်ပိုင်းလောက်တုံးကထင်တယ်) ကလပ်ရှယ်ယာ ဈေးနှုန်းများ ပြုတ်ကျလို့ သူလိုချင်တဲ့ဈေးပေးပြီး ရွှေချထားရတာ ယနေ့အထိပါပဲ။ အခြားသူ့လိုပဲ ဖြစ်နိုင်သူများဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာကျော် သူဌေးကြီးဝါရင်ဘူဖေးပါ။ ဒါပေမဲ့သူက ပိုင်ရှင်သူဌေးဖြစ်ပြီး ဂျော့ဗ်နဲ့ ဖာဂူဆန်ကတော့ ဝန်ထမ်းများလို့ ပိုရင်ပိုမှန်ပါမယ်။ (သူတို့လည်း ကုမ္မဏီရှယ်ယာ အတော်များများ ပိုင်ဆိုင်ကြမှာမလွဲပါဘူး)။
စတိဂျော့ဗ် ၂၀၀၅ခုနှစ်တုန်းက စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းဘာသာပြန်ကို သည်နေရာမှာ သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ http://myanmargazette.net/64860/uncategorized-other/copypaste (သဂျီးကတော့ ဂျော့ဗ်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦး ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်)။ အဲဒီ့မိန့်ခွန်းမှာ သေခြင်းတရားနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူ့ရဲ့အမြင်ကို လေ့လာနိုင်ကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့ အခြေခံဆုံးမချက် အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တကို အပျက်သဘောဆောင်တယ်၊ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး ဆိုသူများ ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ပါ)။
သူဟာ..ဒီခေတ်ရဲ့.. အထင်ရှားဆုံး..အအောင်မြင်ဆုံး.. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦးလည်းဖြစ်ပါကြောင်း..။
ကမ္ဘာကြီးက Jobs လို လူသားတစ်ဦးကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ်…
PC တွေရဲ့ လမ်းပြ…
Smart Phone တွေရဲ့ မြှင့်တင်သူ Jobs ကို ဆုံးရှုံးလိုက်တဲ့ ကွန်ပျူတာလောကကြီး ၀မ်းနည်းနေတာကို တွေ့မြင်နေရပါတယ်..
ကျွန်တော် တစ်ခါမှ အပြင်မှာမမြင်ဖူးတဲ့…Online ကနေတောင် စကားမပြောဖူးတဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်
iPhone 4s ကတော့ Jobs ရဲ့ နောက်ဆုံး ဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ် ရင်ထဲမှာ အမြဲရှိနေဦးမှာပါ…
thanks for sharing . So , he died because of cancer ??
pancreatic cancer နဲ့ဆုံးသွားတာပါ..။ သာမန်အားဖြင့်.. လပိုင်းပဲခံတတ်ပြီး.. ၅၀ရာခိုင်နှုန်းကတော့.. ၅နှစ်ခံလောက်တတ်တယ်တဲ့..။
စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့အထဲ.. အပေါ်က.. သတင်းထောက်ရေးတဲ့သတင်းဖတ်ပြီး..ရီချင်သွားတယ်..။
ပန်းသီး ကွန်ပြူတာ စီအီးအို ကို
သရက်ရွက် ကင်ဆာဖြင့် သေစေ သတဲ့လား။
ခိုင်မျိုး ခိုင်နွယ်ဝင် …ခိုင် အနွယ်ပွါးများလည်း ကျန်းမာ ကြစေကြောင်း
ဂဇက်တက်ကြီးလဲ ခိုင်းရင်…ကိုင်ရင်းဖြင့် ….အရမ်းခိုင်သွားပါစေကြောင်း ……
ရင်ငြိမ်းခိုင် က ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်…..
…….. နွေးသီးခိုင် ……
အယ်ဒီတာအဖွဲ့ဝင် ခိုင်ကိုင်၊ ကိုင်ခိုင်၊ ကိုင်ကိုင်၊ ခိုင်ခိုင်၊ မော်ဒရေတာ ကိုင်ချင်ရာကိုင်၊ ကိုင်ချင်သလိုကိုင်၊ ရုံးအဖွဲ့ဝင် အရမ်းခိုင်၊ သိပ်သိပ်ခိုင် တို့နဲ့ မန်းဂေဇက် ရွာသူရွာသား မိသားစုဝင်များနဲ့ အတူ ရွာသူ ကျမ pooch လည်း ကျန်ရစ်သူမိသားစုနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
လောလောဆယ်တော့ သူ့နေရာမှာ အစားထိုးရတဲ့သူ ပေါ်လာအုန်းမှာ မဟုတ်သေးပါဘူး။
စတိဂျော့ဗ် အကြောင်း ပြောပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
စတိဗ်ဂျော့ကြီး ဆုံးတယ်ဆိုတော့ ဘာရယ်မဟုတ်
စိတ်ထဲမကောင်းဘူး။ ကျွန်တော်လည်း ပန်းသီးထုတ်
ပစ္စည်းတွေ မသုံးနိုင်ပေမဲ့ သူ့ကိုတော့ လေးစားတယ်။
ကျွန်တော် ပထမဦးဆုံးစပြီး ထိတွေ့တဲ့ ကွန်ပျူတာက
တော့ ပန်းသီး ပါ။
စတိဗ်ဂျော့ရယ် ခင်ဗျားကြီးဘယ်လောက်ဘဲ ချမ်းသာချမ်းသာ၊ဘယ်လောက်ဘဲအောင်မြင်အောင်မြင်၊
သူက..တခြားသူတွေကိုလည်း.. သေမင်းကိုအနိုင်တိုက်နည်းတွေ ပြသွားခဲ့တယ်..။
မှန်လိုက်တာ တော်တယ် ပြောတတ်သားပဲ
အားပေးလို့ ကောင်းနိုးကောင်းနိုးနဲ့ 
ရှိစုမဲ့စု အာကေ လေးတွေစုတုန်းရှိသေး…
အင်း တချို့ တော်တဲ့ ကောင်းတဲ့သူတွေကျတော့ လည်း ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သေတတ်ကျပါလား
သူက buddhist ဆိုတော့ ဘာသာရေးဖက်ရော လိုက်စားဖို့ အချိန်ရခဲ့ ရဲ့ လားမသိဘူး
ဒီနေ့ဖတ်လိုက်ရတဲ့ စတိဂျော့ဗ်စ်ရဲ့ အကြောင်းများထဲမှာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာ
– သူ့အဖေ Abdulfattah John Jandaliက အသက်၁၈နှစ်အရွယ်ထဲက အမေရိကန်ကို ရောက်ရှိလာတဲ့ ဆီးရီးယားလူမျိုး မွတ်စလင်ဘာသာဝင်၊ အမေက အဖြူမပါ။ ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသား ဘဝမှာ တွေ့ကြပြီး လက်မထပ်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရခဲ့ပါတယ်။ ဂျော့ဗ်စ် အမေမိဘတွေက ဆီးရီးယန်းတယောက်နဲ့ သူတို့သမီးကို အိမ်ထောင်ချပေးဖို့ သဘောမတူလို့ လမ်းခွဲခဲ့ရကြောင်း ယနေ့အချိန်မှာ အသက်ရှစ်ဆယ်ရှိနေပြီ ဖြစ်တဲ့ နီဗားဒါးပြည်နယ် ရီနိုကာဆီနိုလောင်းကစားရုံ ဒုတိယဥက္ကဌဖြစ်နေသူ စတိဗ်ဂျော့ဗ်စ် အဖေက ဆိုပါတယ်။
– သူ့အမေ၊ သူအမတို့နဲ့ ပြန်လည်စုံစည်းခဲ့ပေမဲ့ အဖေလုပ်သူကို သေတဲ့အထိ မတွေ့ဆုံသွားခဲ့ပါဘူး။ အမလုပ်သူနဲ့ ရက်ခြားလိုလို အမြဲ တယ်လီဖုံးကနေ စကားပြောလေ့ရှိတယ်လို့ လူသိများတဲ့ စာရေးဆရာမဖြစ်နေသူ အမလုပ်သူက ပြောတယ်။ ဂျော့ဗ်ဘ်က သူ့အဖေကို ဘယ်လောက်တောင် နာကြည်းခဲ့သလဲဆိုရင် တချိန်မှာ ပြောဖူးတာ “သူနဲ့ သူ့အဖေ တယောက်ယောက် သေမင်းကုတင်ပေါ်ရောက်နေရင်တောင် တွေ့ရန်မရှိ” လို့အပြတ်ပြောခဲ့တယ်။ ပြောတဲ့အတိုင်းလည်း မဆက်သွယ်ခဲ့ပါဘူး။ အဖေလုပ်သူက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်လောက်ကမှ အက်ပဲလ်ကုမ္မဏီ စီအီးအိုဟာ သူ့သားဆိုတာ သိခဲ့ရကြောင်း ပြောပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ သူ့သားဆီက ဖုံးကိုမျှော်လင့်နေခဲ့ပါသတဲ့။
-ဂျော့ဗ်စ်ဟာ ကောလိပ် ကျောင်းထွက်ဘဝနဲ့ ငယ်စဉ်မှာ အိန္ဒိယကို ခရီးထွက်ခဲ့ပြီး ယောဂကျင့်စဉ်များ လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ မိခင်နိုင်ငံကို ပြန်အလာမှာတော့ ဂျပန်ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦး ဖြစ်လာခဲ့ပြီး သူ့လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲကို ဂျပန်ဇင်ဘုန်းတော်ကြီးရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှု အခမ်းအနားငယ်လေးတခုနဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဂျပန်ဇင်ဘုန်းကြီးကိုပဲ အက်ပဲလ်ကုမ္မဏီရဲ့ spiritual အကြံပေးအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
-ဂျော့ဗ်စ်ဟာ ကုန်းသတ္တဝါမစားသူတဦးလို့ သိရပါတယ်။ ရေသတ္တဝါပဲ စားသူပါ။ အရှေ့တိုင်းဆေးပညာကို လွန်စွာယုံကြည်ပြီး သရက်ရွက်ကင်ဆာရောဂါကို ၂၀၀၄ခုနှစ်မှာ မခွဲစိတ်ခင်အထိ စွဲစွဲမြဲမြဲအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Steve Jobs ရဲ့ဆရာတော့်စကား..။
Kobun Chino Otogawa Roshi Buddha photo (1938-2002)
–Kobun Chino Otogawa Roshi,
သူ့အကြောင်း သဂျီးတင်တာ ဖတ်ဖူးတယ်၊
“သူ့အမေအရင်းက သူ့ကို မွေးစားမယ့်သူဟာ ပညာတတ် ဘွဲ့ရဖြစ်စေချင်ခဲ့တယ်၊
ဒါပေမယ့် တကယ်မွေးစားမယ့်ပညာတတ်တွေက မိန်းကလေး မဟုတ်လို့ ငြင်းခံရပြီး ကောလိပ်တောင်မရောက်ဖူးတဲ့ မိဘတွေဆီရောက်ရတယ်၊
အမေအရင်းကို ဒီကလေးကောလိပ်ရောက်အောင်ပို့ပေးပါမယ် ကတိပေးမှ မွေးစားခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုတာလေ၊”
အမေအရင်းရဲ့ မမွေးနိုင်လို့ပေးရပေမယ့် ကလေးအပေါ်ထားတဲ့ စေတနာ၊
ဒီလိုအဖြစ်တွေ မြန်မာပြည်မှာဆို ဖုံးထားတတ်ပေမယ့် အကြောင်းစုံဖွင့်ပြောတဲ့ မွေးစားမိဘ၊
ဒီလိုခံစားချက်တွေ (emotional trauma) ကြားထဲက ထိပ်တန်းရောက်အောင် တက်နိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်
Pancreatic Cancer ကို ၇နှစ် နေရအောင် ကြံ့ကြံ့ခံသွားတဲ့ ခံနိုင်ရည်၊
အသေစောလို့ နှမျှောလိုက်တာ ကိုကြောင်ကြီးရယ် …
(ဂျော့ကို ပြောတာပါဗျာ …)
၀မ်းနည်းကြောင်း သ၀န်လွှာက ခိုင်မျိုး ခိုင်နွယ် တော်တော် စုံတာပဲ..
ရွာ သဂျီး တောင်ရှည်ပုဆိုးနဲ့ မောင်ရွှေခိုင် မပါဘူး ဖြစ်နေတယ်။
ထည့်ပြီး ၀မ်းနည်းလိုက်ပါအုန်း.. ၀မ်းနည်းတာကတော့ ဟိုနေ့တွေကတည်းက.. တော်တော် ချွှေးပြန်နေတာ.. အခုလောက်ဆို ချွေးတိတ်လောက်ပါဘူး။
iDeath was released by Apple.